Chigaro China VaMugabe Chokonzera Mutauro muZanu-PF
Kubvumbi 25, 2012
Zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muZanu-PF iyo iri kuita sarudzo dzematunhu kana kuti district cordinating committees, idzo dzaunza hondo inotyisa mubato iri munzvimbo dzakaita seManicaland, Mashonaland East, Masvingo neBulawayo.
Izvi zvapa kuti mapurisa anodzivirira mhirizhonga agare akadzipakatira pose panenge poitwa sarudzo dzeZanu-PF idzi.
Zvinonzi pane kurwisana kunotyisa pakati pezvikwata zviri kutsigira gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, VaEmmerson Mnangagwa, uye mutevedzeri wemutungamiri wenyika, Amai Joice Mujuru.
Kunyange hazvo Amai Mujuru naVaMnangagwa vari kuti havana pfungwa yekutsiva VaMugabe, vaviri ava vanonzi vari kutsvaga rutsigiro zvakasimba musarudzo dzeDCC idzi.
NeChipiri, gurukota rezvedzidzo yepamusoro, VaStan Mudenge, avo vanonzi vari kutsigira VaMnangagwa, vanonzi vakanunurwa nemapurisa mushure mekunge vakuda kuitwa kanyama kanyama nevechidiki vanonzi vanotsigira Amai Mujuru pasarudzo dzaiitwa kuMasvingo.
KwaMutare, Masvingo nekuBulawayo vatsigiri veZanu-PF vachiri kuratidzira vachiti havasi kufara nezviri kuitika mubato.
Sachigaro weZanu-PF muManicaland, VaMike Madiro, avo vari kunzi nevamwe vatsigiri veZanu-PF vasiye chigaro, varamba kutaura nezvenyaya iyi.
Mutauriri weZanu-PF, VaRugare Gumbo, vanoti Politiburo yebato ravo ichazeya nyaya iyi svondo rinouya.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachiita zvidzidzo zvepamusoro soro paWestiminster University kuBritain, VaPedzisayi Ruhanya, vanoti VaMugabe ndivo vari kukonzera kunetsana mubato ravo.